Izindaba - Ukwethulwa kwebhodlela lezemidlalo elingu-304
Insimbi engagqwali engu-1.304 inokumelana nokugqwala okuqinile nentengo ephezulu.
2. Insimbi engagqwali engu-304 isetshenziswa kakhulu ezindaweni ezinezimo eziyinkimbinkimbi nokumelana nokugqwala okuqinile.
3. 304 ingeniswe ipuleti lensimbi engagqwali.
4. Iflask yokuhlanza insimbi engagqwali engu-304 iqukethe i-nickel, ngakho-ke ayigqwali, futhi ayi-304 insimbi engagqwali futhi ayigqwali.
5. Inkomishi ye-thermos eyenziwe ngensimbi engagqwali engu-304 iqukethe i-chromium eningi, futhi ingaphezulu liyi-matte futhi ayigqwali
6.Ibhokisi le-304 lensimbi elingenalutho elingenalutho akulula ukugqwala ngoba i-oxide e-chromium ecebile eyakhiwe ebusweni bomzimba wensimbi ingavikela umzimba wensimbi, ukuze kufezwe umphumela wokuphuza okunempilo
Ibhodlela lamanzi lezemidlalo elinomsebenzi wokuhlunga
Isicoci samanzi esiphathekayo yibhodlela lamanzi lezemidlalo elisanda kuvela eminyakeni emibili edlule. Ukubukeka kwayo kuyefana nebhodlela lamanzi lendabuko, kepha into yayo yokuhlunga yangaphakathi yokuhlunga ingashesha ukuhlunga amanzi ahlukahlukene ahlukene njengamanzi omfula wangaphandle, amanzi okusakaza, amanzi kampompi emanzini okuphuza aqondile, okulungele izimo zezemidlalo zangaphandle nganoma yisiphi isikhathi. Thola amanzi okuphuza aphephile futhi aqinisekisiwe noma yikuphi.
Ibhodlela lezemidlalo elijwayelekile
Amathuluzi wamanzi wezemidlalo wendabuko angagcina kuphela amanzi okuphuza adingekayo kwezemidlalo.
Ibhola lezemidlalo elisongekayo
Ibhodlela lamanzi eligoqekayo eliphathekayo, umzimba webhodlela ungasongwa ngemuva kokuphuza kwamanzi futhi ungathathi isikhala.
Ukusetshenziswa kwezemidlalo kubhekisa ebhodleleni lamanzi elisetshenziselwa imicimbi yezemidlalo enamandla kakhulu, njengokugijima, ukukhuphuka, njll. Kubonakala ngokugcizelela kakhulu ikhwalithi yebhakede nomsebenzi wokuvala.
Ibhodlela lamanzi lokugoqa abicah
Ukusetshenziswa kwangaphandle kubhekisa ezikhathini ezinjengokuhamba izintaba, amapikiniki, ukuhamba, njll. Kubonakala ngesisindo esilula nezinhlobo eziningi zamabhakede alenga.
Kungashiwo ukuthi ibhodlela lamanzi langaphandle elisetshenziswa ngabafundi liyafana, kepha ngenxa yokuthi lisetshenziswa yizingane, lihlukile ekwakhiweni nasekukhiqizweni okuvela emabhodleleni amanzi aphambili. Ibhodlela lamanzi lezemidlalo elisetshenziswa ngabafundi lilula kakhulu futhi lisebenziseka kalula, njengeLingasetshenziswa ukuvula ikhava esikhundleni sepulagi.
Insimbi engagqwali ibhodlela lezemidlalo
Izinzuzo zensimbi engagqwali: ziqinile, azikho izinto eziyingozi, azinabungozi kubantu, ziyamelana nokushisa. Okungalungile: Ukuqhutshwa kokushisa okukodwa okukodwa kuyashesha futhi kuyamelana nokugqoka. Isiqukathi sensimbi engagqwali kabili sidinga ukunemba okuphezulu kokucubungula, futhi amalunga athambekele ekuvuzeni kwamanzi nakwigciwane.